Fomba ivelam-peo ho an'ny Apple Music | Avy amin'ny mac aho
Apple dia manamafy ny maody ivelan'ny seranana amin'ny Apple Music
Ao amin'ny lahatsoratra midadasika Momba ny asan'ny Apple Music sy ny serivisy atolotray anay, tsy naneho hevitra momba ny maody ivelan'ny lalao hilalao ny mozika ivelan'ny Internet izahay, ary afaka manamafy izahay izao fa azo atao io safidy filalaovana io miaraka amina fetra sasany. Ary io Apple io ve raha mamela sintomy ny mozika ary alefaso amin'ny offline izany ary tsy handany ny angon-drakitra ny tahanay, saingy io dia mametra ny isan'ny lohahevitra azo alaina kely, tsy dia be loatra, fa io fetra io.
Tsara foana ny manana an'ity safidy tsy miankina ivelan'ny seranana ity ho an'ny Apple Music ary noho izany tsy miankina betsaka amin'ny fifandraisana amin'ny tamba-jotra, amin'ny Spotify io dia ampiharina amin'ny serivisy fisoratana anarana ihany koa ary ahafahantsika mankafy ny zavatra alaina mandritra ny iray volana nefa tsy mila mifandray. ary avy eo dia mila manamarina ny fisoratana anarana. Hatramin'ny niresahanay an'i Spotify indray, azonay atao ny milaza fa ny isan'ny hira natolotr'i Apple ity serivisy ivelan'ny offline ity dia lohahevitra 30 tapitrisa, izay mitovy amin'ny katalaogy iray manontolo izay ananan'i Spotify ankehitriny.
Azontsika antoka fa Apple Music dia hahazo be dia be ny mpanjifa rehefa manomboka amin'ny 30 Jona ho avy izao. Rehefa dinihina ireo fangatahana avy amin'ny antoko fahatelo dia tsy voatery manomboka mampiasa azy io, izay manampy safidy ahafahantsika mifandray bebe kokoa ary hifaneraserana kely aza amin'ireo mpanakanto tiantsika ary ny vidiny dia mitovy na kely aza na tsara kokoa aza amin'ny raharaha misafidy kaonty ao amin'ny fianakaviana, miantoka ny ho avy tsara ho an'ny serivisy izy ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » Apple Music » Apple dia manamafy ny maody ivelan'ny seranana amin'ny Apple Music
Tsy isalasalana fa ho fifaninanana lehibe amin'ny Spotify izany, mpampiasa maro izay tsy nampiasa ity serivisy ity no hampiasa azy io amin'ny Apple. Ary ny lohahevitra tsy an-tserasera dia safidy tsara. Miarahaba sy miarahaba anao noho ny lahatsoratra sy ny tranonkala.
Tonga ao amin'ny Apple Watch i Activation Lock, rafitra fiarovana ady amin'ny halatra
Apple dia namoaka ny beta fahadimy an'ny OS X Yosemite 10.10.4